श्रीमानको मृत्यु पछि सानो छोराको भविष्य सजाउंदै गरेकी श्रीमती मायाको पनि मृत्यु, छोरा बने सानो उमेरै आमाबाबु बिहिन ! – Dainiki Online
11/05/2021 11/05/2021 adminLeaveaComment on श्रीमानको मृत्यु पछि सानो छोराको भविष्य सजाउंदै गरेकी श्रीमती मायाको पनि मृत्यु, छोरा बने सानो उमेरै आमाबाबु बिहिन !
श्रीमान नेपाली सेना’मा जागरे थिए । जागिरकै क्रममा नेपाली सेनाबाट उनि फुटबल पनि खेल्थे । त्यति मात्रै होइन नेपाली सेना भन्दा बाहिर पनि बिभिन्न क्लबमा उनि फुटबल खेलेर परिचित थिए सुरेन्द्र । पछि संकटकालको बेला घरको एउटा मात्रै छोरो ज्या’नै जान सक्ला भनेर परिवारको सल्लाहमा उनलाई जागिर छोड्न लगाइयो र उनि जागिर छोडेर घरमा बस्न थाले । बुवाको पनि पहिल्यै निधन भैसकेको का’रण घरमा आमा एक्लै त्यो माथि नेपाली सेनामा जागिर खाएको छोराको पनि भ’रोसा नहुँदा उनले जागिर छोडेर घरमै बस्न थालेका थिए । घरमा बसेपछि उनले एउटा बैंकको साखमा गार्डको रुपमा काम गर्न थाले । डिउटी आउने जाने क्रममा उनको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृ’त्यु भयो ।
केहि बर्ष अघि माया खत्री संग बिवाह गरेका उनको एउटा छोरा थियो ।आमा, श्रीमती र छोराको सहारा बनेका उनि आफैले ज्या’न गुमाए । घरमा भएको एक्लो छोराको ज्यान गयो परिवार निकै बिक्षिप्त नै थियो तर छोराको नासोको रुपमा भएको एउटा छोरोको मु’ख हेरेर आमा र श्रीमती मा’याको मन खुसि हुने प्रयास गर्दै थियो ।
छोरा हुर्किदै थिए एकदिन खेल्ने क्रममा घरको छत्बाट खसेर घाइते भए तर धन्न उनलाई कुनै ठुलो चोटपटक लागेन सामान्य घा’उ चो’ट भन्दा । उनि ठुलो दुर्घट’ नाबाट जोगिए । सुरेन्द्रले बनाएको एउटा घर थियो जुन घर उनको मृत्यु पछि अध्यारो थियो त्यो घरमा गाउँका देख्ने मान्छेले सुरेन्द्रकै छायाँ देख्थे । मृ’त्यु भएको धेरै बर्ष हुँदा पनि गाउँलेको मुखमा सुरेन्द्रकै घर भनेर देखाउने र चिनाउने गर्थे ।
छोराको मृ’त्यु पछि आमा (सासु) र छोराको साहारा बनेकी मायाले पनि यो संसारबाट बिदा लिएको खबर संगै अहिले सिंगो गाउँ सोक्मग्न छ । उनकै दाजु मोहन खत्रीले पनि सामाजिक संजाल मार्फत भावुक हुँदै लेखेका छन्, ‘ए निस्टुरी दैब त कति कठाेर ,जुवाई लाई अल्पअायु मै चुडेर लगिस बहिनी ले त जसाेतसाे गरेकै थिई तलाई याे पनि स’हन भएन अाज बैनि लाई पनि चु’डेर लगिस ,बैनि त जहाँ भएपनि तेराे आत्मा ले शान्ति पयोस।’ उनले दोश्रो स्टाटसमा लेखेका छन्, तईले लगाईदियकाे याे माला अझै ओइलाको छैन ,बैनि तैले छा’डेर गईस तेराे आत्मा लाई शान्ति मिलाेस। केहि बर्ष अघि श्रीमानको मृ’त्यु अहिले श्रीमतीको मृ’त्युको खबरले परिवारमा मात्रै होइन सिंगो गाउँमा पनि अहले यो घ’टनाले पिडा दिएको छ ।
कोभिड नेपालः थप नौ हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण, १३९ जनाको मृत्यु पुष्टि